1374s WATCH LIVE: CBC ဗန်ကူးဗားသတင်းများကိုမတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၆ ရက်ညနေခင်း - ငှားရမ်းသူများအတွက် COVID-19 နောက်ဆုံးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေး။ images and subtitles
[♪♪♪] >> CBC Vancouver ON ယနေ့ည သတင်းများ >> မလိုအပ်သောကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုရှိသည် သောမှအပိုဆောင်းသေဆုံးမှု အပြင်ထွက်။ >> နောက်ထပ်မြောက်ဗန်ကူးဗားသေ နှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များတွင် SURGE အိမ်နှင့်လည်းတာရှည်ဂရုစိုက်ပါ။ >> WE နှင့်အတူအမှန်တကယ်နှစ်သက်ပါတယ် ကြေငြာချက်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ငှားရန်။ ။ >> အများဆုံးအဖြစ်အပျက်များကိုတားမြစ်ခြင်းနှင့် ငှားရန်အကူအညီ။ >> ငါတို့အိန္ဒိယလမ်းမရှိသောရှိသည် အခုအချိန်မှာ။ >> နှင့်အချို့သောကနေဒါ, Stuck AND အိမ်သို့လာရန်အပူတပြင်း။ >> ကြေငြာသူ: ဒီနည်းကို CBC IS ဗန်ကူးဗားသတင်းများ။ [♪♪♪] >> ကောင်းသောည။ ဘီစီဟောပြောချက်ထဲမှာထိပ်တန်းဆရာဝန် ယနေ့ညနှင့် NO လူနာ GET- အတူတကွ, ငါတို့သည်ကြိုးစားကြအဖြစ် COVID-19 CURVATTEN ။ နောက်အပတ်ဒေါက်တာ Bonny Henry ပြော, အိုင်တီငါတို့အတွက်အလွန်အရေးပါသည် PROVINCE နှင့်ယခုတွင်ပို့ရှိသေး၏ ဒေါက်တာဟင်နရီ AND မှ UPDATE ကို သူမကကျနော်တို့လိုအပ်သည်ဟုဆိုသည် နောက်ထပ်ကိစ္စများအတွက်။ >> သတင်းထောက် - ဟုတ်သည်၊ မှန်ကန်သော၊ မိုက်ကယ်၊ သူသည်ဆေးကုသရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသကဲ့သို့ , BC လာရန်ထောက်ပံ့ရေး အဲဒီမှာပြောနေတာဆရာဝန် 659 ဘီစီနှင့်ငါတို့ကဲ့သို့ယေဘုယျဖြစ်ရပ်များ တစ် ဦး ထက်ပိုသောလူတစ် ဦး ကြား၏ Lynn ကို AT OUTBREAK AT 14 နှင့်အတူချိုင့်ဝှေ့ယမ်းစင်တာ သူတို့ဘဝတွေကိုဆုံးရှုံးနေကြပြီ ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေပြ။ အခုဆိုရင်လူတွေများလာပြီ နောက်ထပ်တာရှည်ဂရုစိုက်မှုကိုဖိတ်ပါ လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ လူ ၂၈ နှင့် ၂၇ HARK PARK တွင်မိမိကိုယ်ကိုအဖွဲ့ဝင်များ ဗဟိုကအပြုသဘောဆောင်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟင်နရီချောင်းတွေ စောင့်ကြည့်ပြီး DRACONIAN ဆိုတာဘာလဲကြည့်ပါ အခုအချိန်မှာကဲ့သို့တိုင်းတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး, ရပ်တန့် အလုပ်နှင့်ပိတ်ပင်မှု GET- စုရုံး အမှန်တကယ်ပြုလိမ့်မည်။ >> WE ကြည့်ရှုရန်မသွားပါ သော၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နိုင်ပါ နောက်လာမည့်အပတ်တိုင်တိုင်းတာပါ။ ပြီးတော့ငါကံကောင်းတယ်ငါဖြစ်၏ ငါတို့မမြင်ရသောမျှော်လင့်ပါတယ် ကိန်းဂဏန်းသိသိသာသာတိုးတက်မှု ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ, စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းအဆင့်။ >> သတင်းထောက်: AND ဟင်နရီမှတ်စုများ နှစ်ခုမှရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည် လွန်ခဲ့သောသီတင်းပတ်နှစ်ပတ်အထိ၊ ယနေ့မှထုတ်ဖော်သူတို့ကိုပေမယ့် သူပြောသောသတင်းကောင်းသည် 183 လူတွေအခုဆိုရင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီ။ Mike? >> သူ Mike: အနည်းငယ်နည်းနည်း သတင်းများ၊ ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >>> ကူညီမယ့်ဘီစီလာ COVID-19 တွင်ဖမ်းမိသောငှားရမ်းသူများ CROSSFIRE နှင့်ငါတို့မရှိကြပါဘူး အခုအချိန်မှာသင့်အတွက်ပုံပြင်ပေမယ့် အခုအချိန်မှာအိုင်တီသွားပါလိမ့်မယ်။ ယခုပင်အရှေ့ဘက်ခြမ်း TO ထောက်ခံသူတွေဘယ်မှာကြောက်လန့်ဘယ်မှာ COVID-19 ပြင်ပတွင်နိုင် ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖျက်သိမ်းပါ အနည်းငယ်လူမှုရေးဖွစျသညျ ယနေ့လူစုလူဝေး LINED အဖြစ် ငွေရေးကြေးရေးလူမှုရေးအကူအညီအထိ စစ်ဆေးမှုများနှင့်နေထိုင်သူအများအပြား လုံခြုံမှုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အပူတပြင်း။ >> ဒီမှာရှိကဲ့သို့, သုံးမျက်နှာဖုံးများ သုံးလက်အိတ်များနှင့်နိုင်သလား သူတို့ကိုသင်ဖြန့်ဝေ။ >> သတင်းထောက်: အိတ်များရှိပါတယ် သောအဝတ်မပါသောအကာအကွယ်ဂီယာ သူမခံစားရသူဘယ်မှာနေရာ အရေးအကြီးဆုံးနဲ့သူမပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည် သူ့ကိုယ်ပိုင်အိတ်ကပ်၏။ >> အိုင်တီချလာ US ဖို့ IS ဒီမှာ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်စား ထိုအရာကိုသေချာစေရန်နေ့တိုင်း ဒီလူတွေကိုဂရုစိုက်တယ်။ >> ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးပါသည် LINEUP တွင်ကြည့်ပါ၊ တူညီသောလေထုကိုရှူ ဒီမှာ။ >> အိုင်တီဆိုလိုတာက Check နေ့ဖြစ်၏ အရှည် LINEUPS နှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်ရန် ဒီမှာလူအများကြီးဆင်းရဲတဲ့ ကျန်းမာရေး, တစ် ဦး ကြောက်မက်ဖွယ်အခြေအနေ ကမ္ဘာ၏အလယ်၌ ကူးစက်ရောဂါ။ >> ငါမြို့တော်မှကြားနာသော အစီအစဉ်ရှိတယ်ငါမမြင်ရ အစီအစဉ်တစ်ခုငါ LINEUPS ကြည့်ပါ သူတို့ GET ကြိုးစားနေ WELFARE စစ်ဆေးမှုများ။ >> သတင်းထောက်: နှင့်အချို့သောနေထိုင်သူများ တိုးပွားလာသော AS အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများပိတ်ထားပြီ ချ။ >> တစ် ဦး က BIG သဘောတူညီချက်လုပ်နေသူ အိုင်တီနှင့်အရာခပ်သိမ်းပိတ်နှင့် အစားအစာမရနိုင်ပါ။ >> အိုင်တီချလိမ့်မည်ဒီမှာ, Hard နှင့်ကြီးစွာသောဖြစ်နိုင်တဝက်ထဲကသုတ် ဤလူများထဲတွင်ငါ့ကိုပါဝင်သည်။ >> ငါတို့ဒီမှာကိစ္စတွေရှိသည် ပြီးပြီ။ >> သတင်းထောက်: ပုံမှန်အားဖြင့် Wendy လမ်းတွေပေါ်မှာပေမယ့်သူမ IS QUARANTINE, သူကြောက်ရွံ့ AN နှင့်အတူကူးဖြတ်သန်းစေခြင်းငှါ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ။ >> ငါအစိုးရသောအရာကိုငါသိ၏ စင်ကြယ်အောင် GY ကြိုးစားနေ TENANTS နှင့်ငါထောက်ပံ့ရေး သူတို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ် အလျင်အမြန်ဖြစ်ပျက်မဟုတ်ပါ OR ဖြစ်ပျက်နှင့်ပြီးသားအိုင်တီ ဖြန့်ဖို့စတင်နေပြီ။ >> သတင်းထောက်: နှင့်ထောက်ခံသူများရှိခဲ့ပါတယ် ကျွေးမွေးဖို့တုံ့ပြန်မှုအဖွဲ့စတင်ခဲ့သည် လူတွေနဲ့ရုံးခန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ် ဒီ Quantantine ပြောပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ PLACE တွင်ဖြစ်ကြသည်။ >> အလွန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲသောအလုပ်လုပ်အုပ်စု နှင့်အဘို့အစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပြီးစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတာ အရှေ့ပိုင်း၌ထုတ်သောဆောင်းပါးများ ဘေးထွက်။ >> သတင်းထောက်: မြို့ ဒီနည်းကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါနောက်ထပ်ရန်ပုံငွေ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအိုင်တီအသည်းအသန် ကိုင်သောသူမည်သူအနည်းငယ် ရှေ့တန်း။ >> သူ Mike: ကူညီပေးနေလာ ဖမ်းမိနေသောဘီစီငှားရမ်း COVID-19 ငှားရမ်းခအဖြစ် ကူညီရန်အစီအစဉ်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ကြားရပြီ TENANTS နှင့်အိမ်များ။ >> သတင်းထောက် - ဘယ်သူမှဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူး သူတို့ရဲ့မူလအိမ်တော် COVID-19, သော PROVINCE မှကတိ TENANTS များအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခဲ့ကြသည် ဒီနေ့၏တစ် ဦး ကရပ်တန့်လှိမ့် လက်ရှိနှင့်အနာဂတ် EVICTORIA ခြွင်းချက်အချို့နှင့်အတူရှောင်, UP ROGERS ROS အတွက်တစ်လကိုဒေါ်လာ ၅၀၀ အထိ အိမ်သို့တလျှောက်ဖြတ်သွား AND ငှားရမ်းမှုတိုးမြှင့်အပေါ်တစ် ဦး အေးခဲ ထိုသူတို့အဘို့အပေးဆောင် သူတို့ငွေပေးချေနိုင်မယ့်သူ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ငှားပါ။ >> ဒီနည်းကိုအစီအစဉ်ခဏငှား ကြည့်ရှုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် LAYOFF ကိုလက်ခံရရှိကြသူ သတိပေးချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ် ဦး DROP-OFF မြင် ဝင်ငွေ။ >> သတင်းထောက် - တချို့အတွက်ဘဝ ဒီနည်းကို GENTLEMAN ကဲ့သို့။ >> အိုင်တီငါ့ကိုကယ်ဆယ်ရေး IS ။ >> သတင်းထောက်: သူ $ 1500 A ပေးဆောင် သူ၏အနောက်ဘက်အဘို့လ တိုက်ခန်း, သူနောက်ဆုံး OFF ခဲ့သည် အပတ်နှင့်သူ၏အိမ်ရှင်တစ် ဦး ထား သောပြောတံခါးကိုအောက်မှာမှတ်ချက် ငှားရမ်းနေဆဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ >> ငါငွေနှင့်အတူသိတယ် FEDERAL အစိုးရမှ AND နောက်ထပ်ပိုက်ဆံတစ်ခုချင်းစီ လ၏အဓိပ္ပာယ်ကဆိုလိုသည် ငါငှားရမ်းနိုင်သလား ဥပဒေကြမ်းများ >> သတင်းထောက်: ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာရှိပါတယ် ဥပမာ, မသိနိုင်ပါလိမ့်မယ် တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် $ 500 BE ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်းတစ်ခုချင်းစီ။ >> Plan ကိုကြည့်နေပါတယ်။ >> သတင်းထောက်: များစွာသော အဖြစ်အပျက်များအပေါ် MORATORIUM သည် ကယ်ဆယ်ရေး၏ BIG SIGH ။ >> ကျေနပ်ပါတယ်။ >> သတင်းထောက်: နေဆဲထောက်ခံသူများ အနိမ့်ဝင်ငွေခွန်ငှားရမ်းခများအတွက်ရှိပါတယ် ဖြစ်သင့်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ အဖြေ >> စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဘာလဲ ပိတ်ပင်၏အဆုံးတွင် အကယ်၍ သင်ကျရှုံးလျှင်၊ နောက်ကွယ်နှင့်ဖြည့်စွက်ထားပါတယ် သင့်ဖုံးအုပ်ရန်လုံလောက်သောမ ထိုသူတို့၏လအတွင်းငှားရမ်း အကျပ်အတည်းပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲ >> သတင်းထောက်: ထိုသူတို့အားတိပ် $ 500 တစ်လငှား ဖြည့်စွက်သူတို့၏သက်သေပြလိမ့်မည် ဖက်ဒရယ်မှတဆင့်ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု EI လျှောက်ထားပေမယ့် PROVINCE သောငွေမဟုတ်ကြောင်းသတိပေးချက်များ အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပုံရသည် APပြီလမတိုင်မီ။ >> သူ Mike: တစ်နှစ်တာ၏ဤအချိန် ပီပီပီပီဝီစကီသည်အလုပ်အများဆုံးထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ငါတို့ပြည်နယ်၌ရှိသောနေရာများပေမယ့် နှင်းလျှောစီးကုန်းများနှင့်များစွာသော အကြောင်းကြောင့်ပိတ်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ COVID-19 အလွန်တင့်တယ်ပါတယ် ဘုရားသခင့အခုအချိန်မှာနှင့် Jesse TOWN Johnson ကတစ် ဦး သောအစီရင်ခံစာ အရာများမတိုင်မီရှည်လျားသောလမ်း ပုံမှန်ပြန်သွားပါ။ >> သတင်းထောက်: ဒီနည်းကို၏တ ဦး တည်းကားအဘယ်သို့ ထိပ်ဆုံးခရီးသွား D ည့်လမ်းညွှန် ON အဲဒီမှာ Planet တူသော ခရီးသွား NO ည့်သည်မဟုတ်ပါ။ >> တော်တော်လေးသေပြီ။ >> NO, NO, တိတ်ဆိတ်။ >> သတင်းထောက်: ပီပီရွာ Spring Spring ပြPROနာများဘယ်မှာလုပ်ပါ ပုံမှန်အားဖြင့်နောက်ထပ်ပြBနာကိုမရ တစ် ဦး အပေါ်တစ် ဦး ထိုင်ခုံရှာထက် ပါဒလီနိုဟာအချည်းနှီးပါပဲ အိမ်တွင်တည်းခိုရန်ဒေသခံများနှင့် IS ည့်သည်များ ရောဂါနှင့်သူတို့ကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ထဲဝင်နိုင်သည့်လူအနည်းငယ် ကနေဒါ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှလည်ပတ် OR အခြားတိုင်းပြည်ဒီမှာ တက်သောယာယီအလုပ် နောက်ထပ်ခေတ္တခံခြင်း။ >> စနေနေ့တွင် E-mail ကိုလက်ခံရရှိ သောသူတို့ပိတ်ပစ်လိမ့်မယ် တနင်္ဂနွေနေ့ရှစ်ရက်၊ သူတို့သည်အိုင်တီ၏အဆုံးဟုဆိုကြ၏ ရာသီ။ >> အိုင်တီပြောသော E-mail ကို IS ရာသီဥတုအလုပ်သမားအားလုံးနိုင် အိမ်သို့အလွယ်တကူပျံသန်းနိုင်သည်။ >> လူတိုင်းက e-mail ကိုရပြီ WE တစ်ပတ်ပိတ်ထားခဲ့သည် ထို့နောက်အိုင်တီတော်တော်များများဖြစ်ခဲ့သည် မလွှဲမရှောင်။ >> သတင်းထောက်: နှင့်အများဆုံးရာသီ အလုပ်အကိုင်များတစ် ဦး ကရှာရန်အလွယ်တကူ အိမ်သို့ပျံသန်းပါ။ >> အိုင်တီတစ် ဦး ရုန်းကန်, စီးပွားရေးဖြစ်ခဲ့သည် CLASS သာငါပြေးဖို့ရှိခဲ့ပါတယ် ဝန်းကျင်နှင့်တစ်ခုခုရှာပါ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည် စျေးနှုန်း။ >> သတင်းထောက်: ဤမျှလောက်များစွာသော အိုင်တီထွက်ခွာဒီနည်းကိုမြင်နိုင်ပါတယ် အနည်းငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် သင် ဦး ဆောင်လျှင်, ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် မူလစာမျက်နှာ, အားလုံးပြီးနောက်, သင်တစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ် သင်နှင့်အတူအိမ်သို့ယူရန်အမှတ်တရ။ >> အိုင်တီလူတွေနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ် သူတို့ကြောင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများရရှိခြင်း အားလုံးအခြားအိမ်သို့သွားနေကြသည် ကျေးရွာတိတ်ဆိတ်ခဲ့သည်။ >> သတင်းထောက်: AND အိုင်တီအများအပြားထွက်ခွာမည် စဉ်းစားရန်မည်မျှကြာမည်နည်း ပီပီဝှစ်ရှာရနျ? မြို့တော်ဝန်သူကပြောပါတယ် စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ် SO သူတို့မြေပြင်နိုင်သလား သူတို့ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါအပြေး ယခုအချိန်တွင် ဦး စားပေးလုံခြုံမှုအတွက်ဖြစ်သည် AND ကျေးရွာဆက်လက်တည်ရှိ ဆိတ်ငြိမ်။ >> သူ Mike: AND Ottawa ရှိ ညဆိုင်းညဉ့်ကိုလိုက်နာ NEGOTIATIONS, ၏သေးငယ်တဲ့အုပ်စု ပါလီမန်အမတ်ရဲ့ဖက်ဒရယ် ကူညီရန် Bill အရေးပေါ်အကူအညီ ကနေဒါအလုပ်သမားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဒါပေမဲ့ASပြီလနီးကပ်လာ AS ငှားရမ်းခသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဝန် အပေါင်ပစ္စည်း LINGERS များနှင့် အခုအချိန်မှာငွေလိုအပ်နေ Wonder သူတို့ဖက်ဒရယ်ရလိမ့်မည်သည့်အခါ ကူညီပါ။ >> Rt ။ ဟွန် Justin Trudeau: THE အကျိုးအမြတ်သည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဖြစ်လိမ့်မည် လာမည့်လေးနာရီအတွက် သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှုံးတဲ့အလုပ်သမားများ COVID-19 ၏ကြောင့် လာမည့်လေးနာရီနှင့်လူများ ငွေလက်ခံရန်စတင်သင့်သည် လျှောက်ထားခြင်း၏ဆယ်ရက်အတွင်းနှင့် ကျနော်တို့ TEAM တိုးမြှင့်ပါတယ် သငျသညျရရှိရန် 10000 လူတွေ သင်လိုအပ်တဲ့အထောက်အပံ့။ >> သူ Mike: အလုပ်တိုင်းနီးပါး တစ် ဦး က PAN ဆန္ဒပြပွဲ AB အားဖြင့်ထိခိုက် RELATED DISPUPTION သည်ဖြစ်နိုင်သည် မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်များပါ ၀ င်သည်။ ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ပင်အသေးစား ဝင်ငွေရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ SHUTDOWNS ကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားသည် နှင့်အစိုးရမျှော်လင့်ပါတယ် BY ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာ ပြီ6နှင့်သော တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေခြင်းကိုဆိုလိုသည် BYပြီဖြင့်စတင်စီးဆင်းနိုင်ပါတယ် 16th နှင့်သင်ကြည့်လျှင် အီးယူအကျိုးအမြတ်အတွက်လျှောက်ထားရန် အိုင်တီရရှိရန်ခက်ခဲပုံ KNOW မှတဆင့်ဖုန်းနံပါတ် ဗဟိုအစိုးရကဤသို့ဆိုသည် 2300 အပိုဆောင်းဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည် ကူညီဖို့ယူ။ >> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းစွာတင်နေသည် အကျပ်အတည်းဖြစ်သောချဉ်းကပ်နည်း လူတွေတတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ် အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိရန်နှင့်ငါတို့ဖြစ်ကြ၏ ၏သိသာနံပါတ်များရွှေ့ပါ သောအလုပ်မှလူတွေ သူတို့သည်အလုပ်ထဲသို့လုပ်နေကြ သူတို့လိုအပ်မယ့် Call ခေါ်ဆိုမှုစင်တာများတွင်လုပ်ပါ သွက်လက်ပြီးဖြစ်ရန်ရှိသည် ဒီနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့လာတာနဲ့အမျှရောက်လာပြီ၊ နောက်ထပ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသော အစဉ်အဆက်ထက်ကိန်းဂဏန်းများ မီ။ >> သူ Mike: FOR စည်းမျဉ်းများ ကနေဒါပြန်လည်ထူထောင်နေကြသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကြေငြာ အသစ်စက်စက်မိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန်ခြင်း အစောပိုင်းခရီးသွားများအတွက်အစီအမံ ဒီနေ့ >> AND အကျိုးသက်ရောက်မှုညသန်းခေါင် သို့ပြန်သွားသောယနေ့ညခရီးသွားများ ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူကနေဒါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်သားများဖြစ်လိမ့်မည် ၁၄ ရက်ကြာလက်ဝယ်ထားရှိရန်လိုအပ်သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုပေးသောအထီးကျန်ခြင်း အကြောင်း မိမိကိုယ်ကိုသီးခြားဖယ်ထုတ်ခြင်း၏အဓိကလိုအပ်ချက် နှင့်တစ် ဦး ချင်းအတွေ့အကြုံ ဆိုက်ရောက်အပေါ်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည် အများပြည်သူအသုံးပြုခြင်းမှလည်းတားမြစ်ထားသည် သူတို့ရဲ့ခရီးသွားဖို့ခရီး မိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန်နေရာများနှင့် သူတို့တားမြစ်ကြလိမ့်မည် နေရာတစ်နေရာမှာမိမိကိုယ်ကိုသီးခြားထားခြင်း သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည် အားနည်းသောလူများ။ >> သူ Mike: ထိုအရပ်၌ရှိ၏ ဒဏ်ငွေနှင့်ပင်အလားအလာ သူတို့ကိုချိုးဖောက်သူတို့အတွက် Arrest AND ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သောယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပါဝင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီး ယူနိုက်တက်စတိတ်ကနေဆက်ပြောသည် FOR သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ရန် CORONAVIRUS ၏ PLED ။ >> AND နောက်ထပ်အဓိကအဖြစ်အပျက် ၏ဖျက်သိမ်းခြင်း PANDEMIC, THE 2020 နွေရာသီဂိမ်း ရိုက်ပုတ်နေကြသည်, သူတို့ခဲ့ကြသည် ကို AT မြေပုံ RIDGE တွင်ကျင်းပရန် ဇူလိုင်လ၏အဆုံးနှင့်မြို့တော်ကိုအစားထိုး 2024 ခုနှစ်တွင်စတင်လိမ့်မည်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ဗြိတိသျှစောင့်ရှောက်သောဟုဆိုသည် ကိုလံဘီယာကျန်းမာရေးသည်သူတို့၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည် ဦး စားပေး။ >> COVID-19 ပန်ဒစ်တပ်ဖွဲ့များ Bray ကျွန်းပိတ်သိမ်း LANGLEY တွင်ဒေသဆိုင်ရာပန်းခြံ။ >> ငါပြောတယ်အဲဒီမှာ ရွေးချယ်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်ပါ ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ - ငါအသုံးပြုတယ် မိမိကိုယ်ကိုပန်းခြံသို့သော်ဤသူကားတစ် ဦး ငါတို့ရှိသမျှသည်ပူဇော်သောယဇ် ယူ။ >> သူ Mike: မက်ထရိုဗန်ကူးဗား IS မိမိ၏ပန်းခြံများဖွင့်လှစ်ဖို့ရှာနေ 22 ဒေသဆိုင်ရာပန်းခြံများလည်ပတ် ပSPိညာဉ်တရားပါဝင်သော နယ်နိမိတ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်အများဆုံး BC မှာရှိတဲ့မြူနီစီပယ်ရှိပြီ ပိတ်ထား PLAYGROUNDS နှင့်အပြင်ဘက် ၏အကြောင်းရင်းများ အပြင်ထွက်လူမပါ လူမှုရေးပတ်ပတ်လည်အောက်ပါအမိန့် အကွာအဝေး။ >> ကောင်းပြီ, ငါတို့ဒီနည်းကိုမမွငျဘူး မက်ထရိုဗန်ကူးဗားအတွက်ကြာမြင့်စွာသောကာလ။ ဟုတ်သည်။ တစ် ဦး ကအောက်ပါအတိုင်းဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းများ ပုံမှန်မှာပုံမှန် Litter မှာ AT STATION, နှင့်စျေးနှုန်း pump ပျက်သွားခဲ့သည် ယခုနှင့်အတူအပတ်တိုင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Coronavirus နှိပ်စက် ဝယ်လိုအားနှင့်ဤအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများ ၁၈ နှစ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခန့်မှန်းချက် ဓာတ်ငွေ့စခန်းများရှိနောက်ထပ် DROPS လာမည့်အပတ်များနှင့်မင်္ဂလာဆောင်များ၊ သင်တန်း၏, လကြာ, ပင် စီမံကိန်းနှင့်အတူနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါအားလုံးရှိခဲ့ပါတယ် တစ် ဦး က SCREECHING တစ်ဝက်လာပါ COQUITLAM စုံတွဲတစ်တွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် သောနေ့စွဲတစ်ခုရက်စွဲတစ်ခုဖွစျသညျနှင့် တောင်မှ GU ည့်သည်များ၏အဓိက သူတို့ခုန်ဆင်းမတက်ရောက်နိုင်ဘူး, နှစ် ဦး စလုံးခြေမနှင့်ခြေချောင်းချစ်ခြင်းနှင့်အတူ သူတို့အားလုံးပတ်ပတ်လည်၌ရှိ၏။ >> သောကြာနေ့ LITERALLY WE 20 ကျနော်တို့မတ် ယောရှု Donaldson မှာပြောနေတာ - ATS ငါတို့သည့်ရဲ့ဆိုသညျကား လက်ထပ်ခဲ့သည် >> အိုင်တီအလွန်ကြီးမားသော WE set တစ် ဦး DRAPERY Archway ဒီမှာ ဧည့်ခန်း။ >> AND ကျနော်တို့ AT အခမ်းအနားရှိသည် 3:00 AND LIMO ရောက်ရှိလာခဲ့နှင့် သူ့ WHO ကမိတျဆှေတစ်ခုဖြစ်သည် အကောင်းဆုံးလူ။ >> WE ခေါင်းစဉ်သို့ LIMO ထဲသို့ဝင် ရွာသို့ငါတို့ဆင်း ချဉ်းကပ်မှုစတင်ခဲ့ပြီးကျွန်မတို့ကိုပြောကြားခဲ့သည် မျက်နှာကို KNOW ကျနော်တို့ KNOW မျက်နှာ, WE မျက်နှာကိုသိပြီးတော့ ငါတို့သူတို့ကိုမြင်ဖို့စတင်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်းတော်မှသူငယ်ချင်းများ သူတို့ဖိတ်မရနိုင်ပြီးသူတို့စီတန်း လမ်းပေါ်မှာ UP သူတို့ခဲ့ကြသည် ကားများနှင့်လူမှုရေးအကွာအဝေး၌တည်၏ သူတို့သည်မိမိတို့ကားထဲတွင်ရှိခဲ့သည်, သူတို့ရဲ့ကားအထက်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သော, ရုံ HONKING, ရွှင်လန်းသော, သူတို့လိုအပ်သမျှ, SCREAMING လုပ်ရမယ်နှင့်သူတို့၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး သင်ရှိသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည် ပထမ ဦး ဆုံးအက။ >> ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုလှည့် တူညီတဲ့ Stasion သို့ရေဒီယိုနှင့် အိုင်တီ CRANKED AND အမှန်တကယ်ခံစားရတယ် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များကဲ့သို့ပင် "အမေရိကန်စာလုံးပေါင်း" လမ်းများတန်းစီ AND ကားများ အမေရိကန်, မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံနှင့် အလယ်၌ဝတ်စုံအက PITT MEADOWS တွင်လမ်း ဗြိတိန်ကိုလံဘီယာ, GREAT ရှိခြင်း အချိန်နှင့်အိုင်တီမမြင်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ >> AND အိုင်တီဒီလောက်ကြီး MAGIC ဖွစျသညျ။ >> ကြေငြာသူ: WEATHER ကို update ကိုယ်ခန္ဓာအရောင်းဆိုင်သို့အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်။ ၊ သင့်ကိုပျော်ရွှင်စွာပြန်လာပြီ နေရာ, လေမိုင်များနှင့်ကြီးမားသော အပြုံးများ။ >> သူ Mike: ငါမင်္ဂလာဆောင်ကိုချစ် ဇာတ်လမ်း။ >> သောကောငျးတစျခုဖွစျသညျ။ >> သင်တိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ >> AND သင်ဘာလုပ်ဖို့ရှိသည် လုပ်ပါ >> သူ Mike: ဟုတ်သည်။ >> သင်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းရသလား ပြင်ပ၌ယနေ့ယနေ့? >> သူ Mike: အနည်းငယ် BIT မဟုတ်အများကြီး။ >> ငါသည်သင်တို့ကို AT မည်သူမဆိုမျှော်လင့်ပါတယ် အိမ်သို့အခွင့်အလမ်းရပြီ အထူးသဖြင့်သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် သောကြောင့်, တောင်ဘက်ကမ်းခြေ သင်ဒီနေ့အတွေ့အကြုံက ဝေးကွာသောမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာရန်အကြောင်း မကြာမီ B ကူး ကျနော်တို့သို့သွားပါပြီ မသတ်မှတ်ရသေးသောလမ်းကြောင်း အဓိကမနက်ဖြန်နံနက်ခင်း၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုအတွက်အန္တရာယ် ဗန်ကူးဗားကျွန်း, နိမ့် MAINLAND တနေ့မှတဆင့် LIFTING ပြီးတော့နောက်ကွယ်မှ မင်းသား George ကဲ့သို့သောမြောက်ဘက်နေရာများ ငါးစင်တီမီတာကောက်နေ BY မတိုင်မီနေ့ရက်အတွင်းမနက်ဖြန်မနက် အိုင်ထဲသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည် ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ FOR အဖြစ်ကောင်းစွာ KOOTENAYS OKANAGAN, မသတ်မှတ်ရသေးအခြေအနေ အဲဒီမှာဒါပေမယ့်မဆိုးဒီနည်းကို IS မိတ်ဆွေဖြစ်မယ့်, သွား ရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးသို့, \_ t ဘီစီဖြတ်ကျော်အပူချိန်အေး သူတို့ဖြစ်သင့်အလယ်အလတ်တွင် သငျသညျသောပိတ်ဆို့မှုကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ် အထွေထွေအဖုံးနှင့်အအေးလေ မြောက်မှဆင်းလာ ကျနော်တို့ကောင်းသောလူမှုရေးပြောပြီ အကွာအဝေးနှင့်သေချာအောင် ကျနော်တို့အချိန်အိမ်တွင်းနှင့်ဤအချိန်ဖြုန်း ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ရက်အတွက်အပတ် မြားစှာသောအလေ့အကျင့် ရနိုင်, အိုင်တီဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ဘူး နောက်ထပ် SNOW ထဲသို့အိုင်တီဆိုတာဘာလဲ တနင်္လာနေ့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရလိမ့်မည် အများကြီးငြင်းဆန် AND အားလုံး ဒါငါးခုကိုကြည့်မျှော် ကြှနျုပျတို့ဖူးသောအရာ ဒီမှာအတွက်ဒီမှာမြင်ကြဘူး ဒါပေမဲ့ငါယုံကြည်စိတ်ချရလိမ့်မယ် တစ်ခုချင်းစီကိုအနည်းဆုံး FOR လာမည့်ငါးဆယ့်ငါးရက်အကြာတွင် A နှင့်ဆက်ဆံလိမ့်မည် ရေပန်းအနည်းငယ်နှင့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ဖြစ်နိုင်သည် အိုင်တီနောက်ထပ်ဖြန့်ဖြူး နောက်အပတ်သို့တိုးနှင့် GET ဒီနည်းကိုတစ် ဦး တည်းအဆင်ပြေစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်း။ >> ထက်, အိုင်ဒီအိုင်ဒီ အိမ်မှာနေ။ ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >> သင်ကကြိုဆိုပါတယ်။ >> တစ် ဦး ကဗန်ကူးဗားကျွန်းအမျိုးသမီး GOT ဖြစ်လျက်ရှိလက်ဆောင်ပေးမယ်အတော်လေး သူမ၏နှင့်အတူအိမ်မှာအထီးကျန် ခင်ပွန်း။ [ကစားနည်းများ] >> သူမကြားရတာအရမ်းပျော်ခဲ့တယ် ပိုက်လိုင်းကသူသည် IG တီးသည်။ သူမ၏ 82th မွေးနေ့ကိုမှတ်သား သူမ၏သပိတ်ပင် BAY နေအိမ်နှင့်သူကပြောပါတယ် အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကုသမှုတစ်ခုပါ သောသူတို့သည်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းပြသ အလွန်ကောင်းသောလူမှုရေးအကွာအဝေး ညွှန်ကြားချက်။ >> WE ဒီနည်းကိုမှတဆင့်ရလိမ့်မည် အတူတကွ။ [SIRENS] >> ဖြတ်ကျော်မက်ထရိုဗန်ကူးဗား တောင်တန်းများလက်ခုပ်သံများပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ် FRONTLINE အလုပ်သမားများအတွက်အိုင်တီ ရှေ့ FOR "ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ဆုံးမ "နှင့်တောင်တန်းများရှိသည် အဖြစ်ကောင်းစွာ IN ၌မှီဝဲ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှာ Victoria အသိအမှတ်ပြု LIT ဘီစီကျန်းမာရေးကုသမှု၏ Hard အလုပ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များနှင့်ဝန်ထမ်း။ >>> အိန္ဒိယက၎င်း၏လေယာဉ်ပိတ်ပစ် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရန် နှင့်သောဇာတ်လမ်း FOR လာမ နောက်တစ်ခု [♪♪♪]
WATCH LIVE: CBC ဗန်ကူးဗားသတင်းများကိုမတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၆ ရက်ညနေခင်း - ငှားရမ်းသူများအတွက် COVID-19 နောက်ဆုံးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေး။
< start="115.381" dur="2.903"> >> CBC Vancouver ON ယနေ့ည >
< start="116.182" dur="5.039"> သတင်းများ >
< start="116.482" dur="5.139"> >> မလိုအပ်သောကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုရှိသည် >
< start="118.45" dur="5.94"> သောမှအပိုဆောင်းသေဆုံးမှု >
< start="121.387" dur="5.139"> အပြင်ထွက်။ >
< start="121.754" dur="6.307"> >> နောက်ထပ်မြောက်ဗန်ကူးဗားသေ >
< start="124.556" dur="6.174"> နှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များတွင် SURGE >
< start="126.759" dur="6.84"> အိမ်နှင့်လည်းတာရှည်ဂရုစိုက်ပါ။ >
< start="128.194" dur="5.905"> >> WE နှင့်အတူအမှန်တကယ်နှစ်သက်ပါတယ် >
< start="130.93" dur="9.777"> ကြေငြာချက်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး >
< start="133.732" dur="12.746"> ငှားရန်။ >
< start="134.533" dur="15.516"> ။ >> အများဆုံးအဖြစ်အပျက်များကိုတားမြစ်ခြင်းနှင့် >
< start="140.873" dur="9.743"> ငှားရန်အကူအညီ။ >
< start="146.612" dur="6.14"> >> ငါတို့အိန္ဒိယလမ်းမရှိသောရှိသည် >
< start="150.182" dur="4.105"> အခုအချိန်မှာ။ >
< start="150.749" dur="4.973"> >> နှင့်အချို့သောကနေဒါ, Stuck AND >
< start="152.918" dur="5.139"> အိမ်သို့လာရန်အပူတပြင်း။ >
< start="154.52" dur="9.777"> >> ကြေငြာသူ: ဒီနည်းကို CBC IS >
< start="155.888" dur="9.877"> ဗန်ကူးဗားသတင်းများ။ >
< start="164.463" dur="5.373"> >> ကောင်းသောည။ >
< start="165.931" dur="5.573"> ဘီစီဟောပြောချက်ထဲမှာထိပ်တန်းဆရာဝန် >
< start="168.4" dur="4.806"> ယနေ့ညနှင့် NO လူနာ >
< start="169.969" dur="5.539"> GET- အတူတကွ, ငါတို့သည်ကြိုးစားကြအဖြစ် >
< start="171.704" dur="5.94"> COVID-19 CURVATTEN ။ >
< start="173.372" dur="6.574"> နောက်အပတ်ဒေါက်တာ Bonny Henry >
< start="175.674" dur="6.874"> ပြော, အိုင်တီငါတို့အတွက်အလွန်အရေးပါသည် >
< start="177.777" dur="6.74"> PROVINCE နှင့်ယခုတွင်ပို့ရှိသေး၏ >
< start="180.112" dur="5.74"> ဒေါက်တာဟင်နရီ AND မှ UPDATE ကို >
< start="182.715" dur="4.672"> သူမကကျနော်တို့လိုအပ်သည်ဟုဆိုသည် >
< start="184.683" dur="5.139"> နောက်ထပ်ကိစ္စများအတွက်။ >
< start="186.118" dur="5.64"> >> သတင်းထောက် - ဟုတ်သည်၊ မှန်ကန်သော၊ မိုက်ကယ်၊ >
< start="187.553" dur="6.741"> သူသည်ဆေးကုသရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသကဲ့သို့ >
< start="190.056" dur="6.34"> , BC လာရန်ထောက်ပံ့ရေး >
< start="191.957" dur="6.106"> အဲဒီမှာပြောနေတာဆရာဝန် 659 >
< start="194.46" dur="5.439"> ဘီစီနှင့်ငါတို့ကဲ့သို့ယေဘုယျဖြစ်ရပ်များ >
< start="196.562" dur="4.905"> တစ် ဦး ထက်ပိုသောလူတစ် ဦး ကြား၏ >
< start="198.197" dur="5.739"> Lynn ကို AT OUTBREAK AT >
< start="200.065" dur="4.805"> 14 နှင့်အတူချိုင့်ဝှေ့ယမ်းစင်တာ >
< start="201.633" dur="5.507"> သူတို့ဘဝတွေကိုဆုံးရှုံးနေကြပြီ >
< start="204.102" dur="6.208"> ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေပြ။ >
< start="205.037" dur="7.541"> အခုဆိုရင်လူတွေများလာပြီ >
< start="207.306" dur="8.109"> နောက်ထပ်တာရှည်ဂရုစိုက်မှုကိုဖိတ်ပါ >
< start="210.476" dur="7.14"> လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ လူ ၂၈ နှင့် ၂၇ >
< start="212.744" dur="6.474"> HARK PARK တွင်မိမိကိုယ်ကိုအဖွဲ့ဝင်များ >
< start="215.581" dur="5.906"> ဗဟိုကအပြုသဘောဆောင်ပြီး၊ >
< start="217.783" dur="5.439"> ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟင်နရီချောင်းတွေ >
< start="219.418" dur="5.206"> စောင့်ကြည့်ပြီး DRACONIAN ဆိုတာဘာလဲကြည့်ပါ >
< start="221.653" dur="5.04"> အခုအချိန်မှာကဲ့သို့တိုင်းတာ >
< start="223.388" dur="4.172"> ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး, ရပ်တန့် >
< start="224.79" dur="5.339"> အလုပ်နှင့်ပိတ်ပင်မှု GET- စုရုံး >
< start="226.859" dur="5.072"> အမှန်တကယ်ပြုလိမ့်မည်။ >
< start="227.694" dur="5.772"> >> WE ကြည့်ရှုရန်မသွားပါ >
< start="230.295" dur="6.241"> သော၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နိုင်ပါ >
< start="232.064" dur="6.607"> နောက်လာမည့်အပတ်တိုင်တိုင်းတာပါ။ >
< start="233.666" dur="6.573"> ပြီးတော့ငါကံကောင်းတယ်ငါဖြစ်၏ >
< start="236.702" dur="5.473"> ငါတို့မမြင်ရသောမျှော်လင့်ပါတယ် >
< start="238.871" dur="9.076"> ကိန်းဂဏန်းသိသိသာသာတိုးတက်မှု >
< start="240.405" dur="9.511"> ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ, >
< start="242.341" dur="9.843"> စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းအဆင့်။ >
< start="248.18" dur="6.107"> >> သတင်းထောက်: AND ဟင်နရီမှတ်စုများ >
< start="250.082" dur="5.84"> နှစ်ခုမှရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည် >
< start="252.351" dur="6.574"> လွန်ခဲ့သောသီတင်းပတ်နှစ်ပတ်အထိ၊ >
< start="254.453" dur="8.442"> ယနေ့မှထုတ်ဖော်သူတို့ကိုပေမယ့် >
< start="256.055" dur="7.173"> သူပြောသောသတင်းကောင်းသည် >
< start="259.058" dur="5.406"> 183 လူတွေအခုဆိုရင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီ။ >
< start="263.428" dur="4.539"> >> သူ Mike: အနည်းငယ်နည်းနည်း >
< start="264.63" dur="9.31"> သတင်းများ၊ ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="265.465" dur="10.71"> >>> ကူညီမယ့်ဘီစီလာ >
< start="270.903" dur="7.541"> COVID-19 တွင်ဖမ်းမိသောငှားရမ်းသူများ >
< start="274.139" dur="5.874"> CROSSFIRE နှင့်ငါတို့မရှိကြပါဘူး >
< start="276.342" dur="5.272"> အခုအချိန်မှာသင့်အတွက်ပုံပြင်ပေမယ့် >
< start="278.61" dur="5.64"> အခုအချိန်မှာအိုင်တီသွားပါလိမ့်မယ်။ >
< start="280.179" dur="5.339"> ယခုပင်အရှေ့ဘက်ခြမ်း TO >
< start="281.781" dur="5.939"> ထောက်ခံသူတွေဘယ်မှာကြောက်လန့်ဘယ်မှာ >
< start="284.416" dur="4.839"> COVID-19 ပြင်ပတွင်နိုင် >
< start="285.718" dur="5.138"> ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖျက်သိမ်းပါ >
< start="287.886" dur="5.94"> အနည်းငယ်လူမှုရေးဖွစျသညျ >
< start="289.421" dur="6.207"> ယနေ့လူစုလူဝေး LINED အဖြစ် >
< start="291.023" dur="6.706"> ငွေရေးကြေးရေးလူမှုရေးအကူအညီအထိ >
< start="293.992" dur="6.073"> စစ်ဆေးမှုများနှင့်နေထိုင်သူအများအပြား >
< start="295.794" dur="6.808"> လုံခြုံမှုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အပူတပြင်း။ >
< start="297.863" dur="6.274"> >> ဒီမှာရှိကဲ့သို့, သုံးမျက်နှာဖုံးများ >
< start="300.199" dur="6.14"> သုံးလက်အိတ်များနှင့်နိုင်သလား >
< start="302.801" dur="6.04"> သူတို့ကိုသင်ဖြန့်ဝေ။ >
< start="304.404" dur="6.339"> >> သတင်းထောက်: အိတ်များရှိပါတယ် >
< start="306.505" dur="7.642"> သောအဝတ်မပါသောအကာအကွယ်ဂီယာ >
< start="309.041" dur="7.574"> သူမခံစားရသူဘယ်မှာနေရာ >
< start="310.876" dur="7.675"> အရေးအကြီးဆုံးနဲ့သူမပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည် >
< start="314.313" dur="6.24"> သူ့ကိုယ်ပိုင်အိတ်ကပ်၏။ >
< start="316.748" dur="5.239"> >> အိုင်တီချလာ US ဖို့ IS >
< start="318.717" dur="4.738"> ဒီမှာ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်စား >
< start="320.719" dur="5.073"> ထိုအရာကိုသေချာစေရန်နေ့တိုင်း >
< start="322.221" dur="5.506"> ဒီလူတွေကိုဂရုစိုက်တယ်။ >
< start="323.589" dur="6.106"> >> ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးပါသည် >
< start="325.992" dur="4.07"> LINEUP တွင်ကြည့်ပါ၊ >
< start="327.926" dur="4.038"> တူညီသောလေထုကိုရှူ >
< start="329.861" dur="5.34"> ဒီမှာ။ >
< start="330.195" dur="8.676"> >> အိုင်တီဆိုလိုတာက Check နေ့ဖြစ်၏ >
< start="332.13" dur="8.342"> အရှည် LINEUPS နှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်ရန် >
< start="335.367" dur="8.176"> ဒီမှာလူအများကြီးဆင်းရဲတဲ့ >
< start="339.037" dur="4.906"> ကျန်းမာရေး, တစ် ဦး ကြောက်မက်ဖွယ်အခြေအနေ >
< start="340.606" dur="5.306"> ကမ္ဘာ၏အလယ်၌ >
< start="343.676" dur="4.07"> ကူးစက်ရောဂါ။ >
< start="344.076" dur="5.372"> >> ငါမြို့တော်မှကြားနာသော >
< start="346.078" dur="6.474"> အစီအစဉ်ရှိတယ်ငါမမြင်ရ >
< start="347.88" dur="6.607"> အစီအစဉ်တစ်ခုငါ LINEUPS ကြည့်ပါ >
< start="349.648" dur="7.074"> သူတို့ GET ကြိုးစားနေ >
< start="352.718" dur="5.072"> WELFARE စစ်ဆေးမှုများ။ >
< start="354.72" dur="4.705"> >> သတင်းထောက်: နှင့်အချို့သောနေထိုင်သူများ >
< start="356.888" dur="2.87"> တိုးပွားလာသော AS >
< start="357.99" dur="5.972"> အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများပိတ်ထားပြီ >
< start="359.591" dur="5.84"> ချ။ >
< start="359.892" dur="7.641"> >> တစ် ဦး က BIG သဘောတူညီချက်လုပ်နေသူ >
< start="364.163" dur="5.673"> အိုင်တီနှင့်အရာခပ်သိမ်းပိတ်နှင့် >
< start="365.597" dur="6.274"> အစားအစာမရနိုင်ပါ။ >
< start="367.667" dur="5.972"> >> အိုင်တီချလိမ့်မည်ဒီမှာ, Hard >
< start="370.002" dur="6.841"> နှင့်ကြီးစွာသောဖြစ်နိုင်တဝက်ထဲကသုတ် >
< start="372.004" dur="5.406"> ဤလူများထဲတွင်ငါ့ကိုပါဝင်သည်။ >
< start="373.773" dur="4.605"> >> ငါတို့ဒီမှာကိစ္စတွေရှိသည် >
< start="377.042" dur="3.204"> ပြီးပြီ။ >
< start="377.643" dur="4.638"> >> သတင်းထောက်: ပုံမှန်အားဖြင့် Wendy >
< start="378.544" dur="5.673"> လမ်းတွေပေါ်မှာပေမယ့်သူမ IS >
< start="380.412" dur="4.505"> QUARANTINE, သူကြောက်ရွံ့ >
< start="382.448" dur="4.071"> AN နှင့်အတူကူးဖြတ်သန်းစေခြင်းငှါ >
< start="384.383" dur="5.039"> ရောဂါကူးစက်ခံရသူ။ >
< start="385.051" dur="6.906"> >> ငါအစိုးရသောအရာကိုငါသိ၏ >
< start="386.685" dur="6.841"> စင်ကြယ်အောင် GY ကြိုးစားနေ >
< start="389.588" dur="5.606"> TENANTS နှင့်ငါထောက်ပံ့ရေး >
< start="392.124" dur="4.371"> သူတို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ် >
< start="393.692" dur="5.105"> အလျင်အမြန်ဖြစ်ပျက်မဟုတ်ပါ >
< start="395.36" dur="4.706"> OR ဖြစ်ပျက်နှင့်ပြီးသားအိုင်တီ >
< start="396.662" dur="5.172"> ဖြန့်ဖို့စတင်နေပြီ။ >
< start="399.064" dur="4.405"> >> သတင်းထောက်: နှင့်ထောက်ခံသူများရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="400.232" dur="4.905"> ကျွေးမွေးဖို့တုံ့ပြန်မှုအဖွဲ့စတင်ခဲ့သည် >
< start="402" dur="4.238"> လူတွေနဲ့ရုံးခန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ် >
< start="403.635" dur="4.539"> ဒီ Quantantine ပြောပါ >
< start="405.304" dur="5.039"> လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ PLACE တွင်ဖြစ်ကြသည်။ >
< start="406.372" dur="5.639"> >> အလွန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိသည် >
< start="408.34" dur="5.373"> ဖွံ့ဖြိုးဆဲသောအလုပ်လုပ်အုပ်စု >
< start="410.51" dur="5.972"> နှင့်အဘို့အစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည် >
< start="412.178" dur="4.838"> ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပြီးစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတာ >
< start="413.879" dur="4.538"> အရှေ့ပိုင်း၌ထုတ်သောဆောင်းပါးများ >
< start="416.648" dur="4.405"> ဘေးထွက်။ >
< start="417.249" dur="6.206"> >> သတင်းထောက်: မြို့ >
< start="418.583" dur="8.677"> ဒီနည်းကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါနောက်ထပ်ရန်ပုံငွေ >
< start="421.22" dur="6.573"> ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအိုင်တီအသည်းအသန် >
< start="423.655" dur="5.44"> ကိုင်သောသူမည်သူအနည်းငယ် >
< start="427.426" dur="4.471"> ရှေ့တန်း။ >
< start="428.093" dur="7.308"> >> သူ Mike: ကူညီပေးနေလာ >
< start="429.294" dur="8.176"> ဖမ်းမိနေသောဘီစီငှားရမ်း >
< start="432.031" dur="7.875"> COVID-19 ငှားရမ်းခအဖြစ် >
< start="435.601" dur="5.505"> ကူညီရန်အစီအစဉ်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ကြားရပြီ >
< start="437.636" dur="5.973"> TENANTS နှင့်အိမ်များ။ >
< start="440.139" dur="5.839"> >> သတင်းထောက် - ဘယ်သူမှဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူး >
< start="441.306" dur="6.741"> သူတို့ရဲ့မူလအိမ်တော် COVID-19, သော >
< start="443.843" dur="6.039"> PROVINCE မှကတိ >
< start="446.178" dur="5.206"> TENANTS များအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခဲ့ကြသည် >
< start="448.247" dur="6.273"> ဒီနေ့၏တစ် ဦး ကရပ်တန့်လှိမ့် >
< start="450.016" dur="11.845"> လက်ရှိနှင့်အနာဂတ် EVICTORIA >
< start="451.583" dur="12.614"> ခြွင်းချက်အချို့နှင့်အတူရှောင်, UP >
< start="454.686" dur="12.814"> ROGERS ROS အတွက်တစ်လကိုဒေါ်လာ ၅၀၀ အထိ >
< start="461.994" dur="7.341"> အိမ်သို့တလျှောက်ဖြတ်သွား >
< start="464.363" dur="7.274"> AND ငှားရမ်းမှုတိုးမြှင့်အပေါ်တစ် ဦး အေးခဲ >
< start="467.667" dur="5.671"> ထိုသူတို့အဘို့အပေးဆောင် >
< start="469.468" dur="7.441"> သူတို့ငွေပေးချေနိုင်မယ့်သူ >
< start="471.77" dur="7.542"> ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ငှားပါ။ >
< start="473.472" dur="8.175"> >> ဒီနည်းကိုအစီအစဉ်ခဏငှား >
< start="477.075" dur="6.975"> ကြည့်ရှုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် >
< start="479.478" dur="4.971"> LAYOFF ကိုလက်ခံရရှိကြသူ >
< start="481.847" dur="5.806"> သတိပေးချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ် ဦး DROP-OFF မြင် >
< start="484.249" dur="4.939"> ဝင်ငွေ။ >
< start="484.65" dur="7.141"> >> သတင်းထောက် - တချို့အတွက်ဘဝ >
< start="487.853" dur="6.173"> ဒီနည်းကို GENTLEMAN ကဲ့သို့။ >
< start="489.321" dur="6.607"> >> အိုင်တီငါ့ကိုကယ်ဆယ်ရေး IS ။ >
< start="492.024" dur="5.973"> >> သတင်းထောက်: သူ $ 1500 A ပေးဆောင် >
< start="494.193" dur="5.706"> သူ၏အနောက်ဘက်အဘို့လ >
< start="496.094" dur="6.106"> တိုက်ခန်း, သူနောက်ဆုံး OFF ခဲ့သည် >
< start="498.163" dur="5.339"> အပတ်နှင့်သူ၏အိမ်ရှင်တစ် ဦး ထား >
< start="500.065" dur="5.072"> သောပြောတံခါးကိုအောက်မှာမှတ်ချက် >
< start="502.434" dur="4.872"> ငှားရမ်းနေဆဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ >
< start="503.635" dur="7.308"> >> ငါငွေနှင့်အတူသိတယ် >
< start="505.271" dur="7.14"> FEDERAL အစိုးရမှ >
< start="507.439" dur="7.408"> AND နောက်ထပ်ပိုက်ဆံတစ်ခုချင်းစီ >
< start="511.109" dur="4.305"> လ၏အဓိပ္ပာယ်ကဆိုလိုသည် >
< start="512.577" dur="3.938"> ငါငှားရမ်းနိုင်သလား >
< start="515.047" dur="3.537"> ဥပဒေကြမ်းများ >
< start="515.647" dur="7.008"> >> သတင်းထောက်: ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာရှိပါတယ် >
< start="516.749" dur="7.975"> ဥပမာ, မသိနိုင်ပါလိမ့်မယ် >
< start="518.75" dur="9.577"> တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် $ 500 BE >
< start="522.854" dur="7.575"> ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်းတစ်ခုချင်းစီ။ >
< start="524.857" dur="7.674"> >> Plan ကိုကြည့်နေပါတယ်။ >
< start="528.56" dur="5.072"> >> သတင်းထောက်: များစွာသော >
< start="530.595" dur="5.073"> အဖြစ်အပျက်များအပေါ် MORATORIUM သည် >
< start="532.697" dur="5.106"> ကယ်ဆယ်ရေး၏ BIG SIGH ။ >
< start="533.766" dur="6.306"> >> ကျေနပ်ပါတယ်။ >
< start="535.868" dur="5.438"> >> သတင်းထောက်: နေဆဲထောက်ခံသူများ >
< start="537.969" dur="3.838"> အနိမ့်ဝင်ငွေခွန်ငှားရမ်းခများအတွက်ရှိပါတယ် >
< start="540.238" dur="3.338"> ဖြစ်သင့်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ >
< start="541.473" dur="4.272"> အဖြေ >
< start="541.94" dur="5.239"> >> စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဘာလဲ >
< start="543.709" dur="5.606"> ပိတ်ပင်၏အဆုံးတွင် >
< start="545.878" dur="6.14"> အကယ်၍ သင်ကျရှုံးလျှင်၊ >
< start="547.346" dur="6.807"> နောက်ကွယ်နှင့်ဖြည့်စွက်ထားပါတယ် >
< start="549.481" dur="6.507"> သင့်ဖုံးအုပ်ရန်လုံလောက်သောမ >
< start="552.184" dur="4.705"> ထိုသူတို့၏လအတွင်းငှားရမ်း >
< start="554.319" dur="6.841"> အကျပ်အတည်းပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲ >
< start="556.255" dur="6.373"> >> သတင်းထောက်: ထိုသူတို့အားတိပ် >
< start="557.022" dur="7.308"> $ 500 တစ်လငှား >
< start="561.326" dur="5.907"> ဖြည့်စွက်သူတို့၏သက်သေပြလိမ့်မည် >
< start="562.761" dur="6.274"> ဖက်ဒရယ်မှတဆင့်ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု >
< start="564.496" dur="6.007"> EI လျှောက်ထားပေမယ့် PROVINCE >
< start="567.433" dur="6.272"> သောငွေမဟုတ်ကြောင်းသတိပေးချက်များ >
< start="569.235" dur="5.772"> အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပုံရသည် >
< start="570.669" dur="6.14"> APပြီလမတိုင်မီ။ >
< start="573.905" dur="4.405"> >> သူ Mike: တစ်နှစ်တာ၏ဤအချိန် >
< start="575.241" dur="5.138"> ပီပီပီပီဝီစကီသည်အလုပ်အများဆုံးထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="576.975" dur="4.571"> ငါတို့ပြည်နယ်၌ရှိသောနေရာများပေမယ့် >
< start="578.476" dur="6.107"> နှင်းလျှောစီးကုန်းများနှင့်များစွာသော >
< start="580.545" dur="5.373"> အကြောင်းကြောင့်ပိတ်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ >
< start="581.713" dur="5.74"> COVID-19 အလွန်တင့်တယ်ပါတယ် >
< start="584.717" dur="4.338"> ဘုရားသခင့အခုအချိန်မှာနှင့် Jesse TOWN >
< start="586.084" dur="4.672"> Johnson ကတစ် ဦး သောအစီရင်ခံစာ >
< start="587.586" dur="4.372"> အရာများမတိုင်မီရှည်လျားသောလမ်း >
< start="589.221" dur="4.705"> ပုံမှန်ပြန်သွားပါ။ >
< start="590.989" dur="4.939"> >> သတင်းထောက်: ဒီနည်းကို၏တ ဦး တည်းကားအဘယ်သို့ >
< start="592.091" dur="5.038"> ထိပ်ဆုံးခရီးသွား D ည့်လမ်းညွှန် ON >
< start="594.092" dur="4.238"> အဲဒီမှာ Planet တူသော >
< start="596.094" dur="5.74"> ခရီးသွား NO ည့်သည်မဟုတ်ပါ။ >
< start="597.263" dur="6.039"> >> တော်တော်လေးသေပြီ။ >
< start="598.464" dur="6.173"> >> NO, NO, တိတ်ဆိတ်။ >
< start="602.034" dur="5.005"> >> သတင်းထောက်: ပီပီရွာ >
< start="603.468" dur="5.639"> Spring Spring ပြPROနာများဘယ်မှာလုပ်ပါ >
< start="604.803" dur="6.607"> ပုံမှန်အားဖြင့်နောက်ထပ်ပြBနာကိုမရ >
< start="607.205" dur="6.241"> တစ် ဦး အပေါ်တစ် ဦး ထိုင်ခုံရှာထက် >
< start="609.241" dur="6.54"> ပါဒလီနိုဟာအချည်းနှီးပါပဲ >
< start="611.576" dur="6.04"> အိမ်တွင်တည်းခိုရန်ဒေသခံများနှင့် IS ည့်သည်များ >
< start="613.612" dur="5.606"> ရောဂါနှင့်သူတို့ကာလအတွင်း >
< start="615.948" dur="7.341"> ကျွန်ုပ်တို့ထဲဝင်နိုင်သည့်လူအနည်းငယ် >
< start="617.782" dur="7.008"> ကနေဒါ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှလည်ပတ် >
< start="619.452" dur="6.706"> OR အခြားတိုင်းပြည်ဒီမှာ >
< start="623.488" dur="5.64"> တက်သောယာယီအလုပ် >
< start="624.99" dur="5.672"> နောက်ထပ်ခေတ္တခံခြင်း။ >
< start="626.291" dur="6.574"> >> စနေနေ့တွင် E-mail ကိုလက်ခံရရှိ >
< start="629.261" dur="5.406"> သောသူတို့ပိတ်ပစ်လိမ့်မယ် >
< start="630.829" dur="4.271"> တနင်္ဂနွေနေ့ရှစ်ရက်၊ >
< start="633.065" dur="3.837"> သူတို့သည်အိုင်တီ၏အဆုံးဟုဆိုကြ၏ >
< start="634.833" dur="5.673"> ရာသီ။ >
< start="635.234" dur="6.206"> >> အိုင်တီပြောသော E-mail ကို IS >
< start="637.068" dur="5.974"> ရာသီဥတုအလုပ်သမားအားလုံးနိုင် >
< start="640.672" dur="3.771"> အိမ်သို့အလွယ်တကူပျံသန်းနိုင်သည်။ >
< start="641.574" dur="5.005"> >> လူတိုင်းက e-mail ကိုရပြီ >
< start="643.208" dur="3.904"> WE တစ်ပတ်ပိတ်ထားခဲ့သည် >
< start="644.609" dur="3.538"> ထို့နောက်အိုင်တီတော်တော်များများဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="646.778" dur="4.138"> မလွှဲမရှောင်။ >
< start="647.379" dur="4.104"> >> သတင်းထောက်: နှင့်အများဆုံးရာသီ >
< start="648.28" dur="5.372"> အလုပ်အကိုင်များတစ် ဦး ကရှာရန်အလွယ်တကူ >
< start="651.083" dur="4.304"> အိမ်သို့ပျံသန်းပါ။ >
< start="651.616" dur="5.54"> >> အိုင်တီတစ် ဦး ရုန်းကန်, စီးပွားရေးဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="653.786" dur="5.706"> CLASS သာငါပြေးဖို့ရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="655.587" dur="4.338"> ဝန်းကျင်နှင့်တစ်ခုခုရှာပါ >
< start="657.322" dur="3.403"> လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="659.658" dur="2.636"> စျေးနှုန်း။ >
< start="660.158" dur="4.171"> >> သတင်းထောက်: ဤမျှလောက်များစွာသော >
< start="660.926" dur="4.905"> အိုင်တီထွက်ခွာဒီနည်းကိုမြင်နိုင်ပါတယ် >
< start="662.461" dur="5.806"> အနည်းငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="664.529" dur="5.306"> သင် ဦး ဆောင်လျှင်, ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် >
< start="666.031" dur="5.739"> မူလစာမျက်နှာ, အားလုံးပြီးနောက်, သင်တစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ် >
< start="668.433" dur="4.938"> သင်နှင့်အတူအိမ်သို့ယူရန်အမှတ်တရ။ >
< start="669.969" dur="7.307"> >> အိုင်တီလူတွေနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ် >
< start="671.937" dur="7.641"> သူတို့ကြောင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများရရှိခြင်း >
< start="673.538" dur="7.675"> အားလုံးအခြားအိမ်သို့သွားနေကြသည် >
< start="677.442" dur="5.873"> ကျေးရွာတိတ်ဆိတ်ခဲ့သည်။ >
< start="679.778" dur="5.906"> >> သတင်းထောက်: AND အိုင်တီအများအပြားထွက်ခွာမည် >
< start="681.379" dur="6.141"> စဉ်းစားရန်မည်မျှကြာမည်နည်း >
< start="683.481" dur="5.473"> ပီပီဝှစ်ရှာရနျ? >
< start="685.85" dur="5.173"> မြို့တော်ဝန်သူကပြောပါတယ် >
< start="687.686" dur="5.639"> စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ် SO >
< start="689.121" dur="5.873"> သူတို့မြေပြင်နိုင်သလား >
< start="691.223" dur="6.04"> သူတို့ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါအပြေး >
< start="693.458" dur="4.939"> ယခုအချိန်တွင် ဦး စားပေးလုံခြုံမှုအတွက်ဖြစ်သည် >
< start="695.127" dur="4.605"> AND ကျေးရွာဆက်လက်တည်ရှိ >
< start="697.429" dur="5.239"> ဆိတ်ငြိမ်။ >
< start="698.63" dur="5.673"> >> သူ Mike: AND Ottawa ရှိ >
< start="699.931" dur="6.374"> ညဆိုင်းညဉ့်ကိုလိုက်နာ >
< start="702.868" dur="5.806"> NEGOTIATIONS, ၏သေးငယ်တဲ့အုပ်စု >
< start="704.469" dur="5.707"> ပါလီမန်အမတ်ရဲ့ဖက်ဒရယ် >
< start="706.505" dur="7.808"> ကူညီရန် Bill အရေးပေါ်အကူအညီ >
< start="708.84" dur="8.176"> ကနေဒါအလုပ်သမားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ >
< start="710.342" dur="8.676"> ဒါပေမဲ့ASပြီလနီးကပ်လာ AS >
< start="714.513" dur="5.839"> ငှားရမ်းခသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဝန် >
< start="717.149" dur="8.876"> အပေါင်ပစ္စည်း LINGERS များနှင့် >
< start="719.184" dur="7.208"> အခုအချိန်မှာငွေလိုအပ်နေ Wonder >
< start="720.552" dur="6.741"> သူတို့ဖက်ဒရယ်ရလိမ့်မည်သည့်အခါ >
< start="726.191" dur="1.936"> ကူညီပါ။ >
< start="726.625" dur="3.804"> >> Rt ။ ဟွန် Justin Trudeau: THE >
< start="727.426" dur="6.14"> အကျိုးအမြတ်သည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="728.294" dur="7.14"> လာမည့်လေးနာရီအတွက် >
< start="730.662" dur="6.541"> သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှုံးတဲ့အလုပ်သမားများ >
< start="733.732" dur="5.072"> COVID-19 ၏ကြောင့် >
< start="735.6" dur="7.609"> လာမည့်လေးနာရီနှင့်လူများ >
< start="737.336" dur="8.675"> ငွေလက်ခံရန်စတင်သင့်သည် >
< start="738.937" dur="8.576"> လျှောက်ထားခြင်း၏ဆယ်ရက်အတွင်းနှင့် >
< start="743.408" dur="5.773"> ကျနော်တို့ TEAM တိုးမြှင့်ပါတယ် >
< start="746.211" dur="5.206"> သငျသညျရရှိရန် 10000 လူတွေ >
< start="747.679" dur="11.312"> သင်လိုအပ်တဲ့အထောက်အပံ့။ >
< start="749.448" dur="11.211"> >> သူ Mike: အလုပ်တိုင်းနီးပါး >
< start="751.583" dur="11.612"> တစ် ဦး က PAN ဆန္ဒပြပွဲ AB အားဖြင့်ထိခိုက် >
< start="759.157" dur="5.273"> RELATED DISPUPTION သည်ဖြစ်နိုင်သည် >
< start="760.859" dur="5.64"> မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်များပါ ၀ င်သည်။ >
< start="763.361" dur="6.207"> ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ပင်အသေးစား >
< start="764.63" dur="7.04"> ဝင်ငွေရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ >
< start="766.632" dur="7.207"> SHUTDOWNS ကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားသည် >
< start="769.701" dur="6.507"> နှင့်အစိုးရမျှော်လင့်ပါတယ် >
< start="771.87" dur="6.14"> BY ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာ >
< start="774.072" dur="6.24"> ပြီ6နှင့်သော >
< start="776.374" dur="5.506"> တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေခြင်းကိုဆိုလိုသည် >
< start="778.177" dur="6.84"> BYပြီဖြင့်စတင်စီးဆင်းနိုင်ပါတယ် >
< start="780.445" dur="6.007"> 16th နှင့်သင်ကြည့်လျှင် >
< start="782.047" dur="6.072"> အီးယူအကျိုးအမြတ်အတွက်လျှောက်ထားရန် >
< start="785.15" dur="4.572"> အိုင်တီရရှိရန်ခက်ခဲပုံ KNOW >
< start="786.618" dur="5.873"> မှတဆင့်ဖုန်းနံပါတ် >
< start="788.253" dur="5.272"> ဗဟိုအစိုးရကဤသို့ဆိုသည် >
< start="789.888" dur="5.773"> 2300 အပိုဆောင်းဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည် >
< start="792.657" dur="4.605"> ကူညီဖို့ယူ။ >
< start="793.659" dur="5.305"> >> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းစွာတင်နေသည် >
< start="795.928" dur="6.607"> အကျပ်အတည်းဖြစ်သောချဉ်းကပ်နည်း >
< start="797.429" dur="6.173"> လူတွေတတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ် >
< start="799.13" dur="5.906"> အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိရန်နှင့်ငါတို့ဖြစ်ကြ၏ >
< start="802.701" dur="4.004"> ၏သိသာနံပါတ်များရွှေ့ပါ >
< start="803.736" dur="5.272"> သောအလုပ်မှလူတွေ >
< start="805.203" dur="5.74"> သူတို့သည်အလုပ်ထဲသို့လုပ်နေကြ >
< start="806.839" dur="6.173"> သူတို့လိုအပ်မယ့် >
< start="809.174" dur="5.94"> Call ခေါ်ဆိုမှုစင်တာများတွင်လုပ်ပါ >
< start="811.109" dur="6.306"> သွက်လက်ပြီးဖြစ်ရန်ရှိသည် >
< start="813.145" dur="7.141"> ဒီနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့လာတာနဲ့အမျှရောက်လာပြီ၊ >
< start="815.28" dur="5.539"> နောက်ထပ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသော >
< start="817.649" dur="4.271"> အစဉ်အဆက်ထက်ကိန်းဂဏန်းများ >
< start="820.452" dur="3.27"> မီ။ >
< start="821.052" dur="3.204"> >> သူ Mike: FOR စည်းမျဉ်းများ >
< start="822.12" dur="3.905"> ကနေဒါပြန်လည်ထူထောင်နေကြသည် >
< start="823.922" dur="4.472"> ပြင်းပြင်းထန်ထန်။ >
< start="824.456" dur="6.14"> ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကြေငြာ >
< start="826.191" dur="4.805"> အသစ်စက်စက်မိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန်ခြင်း >
< start="828.56" dur="4.772"> အစောပိုင်းခရီးသွားများအတွက်အစီအမံ >
< start="830.762" dur="4.037"> ဒီနေ့ >
< start="831.129" dur="6.207"> >> AND အကျိုးသက်ရောက်မှုညသန်းခေါင် >
< start="833.532" dur="5.205"> သို့ပြန်သွားသောယနေ့ညခရီးသွားများ >
< start="834.933" dur="8.976"> ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူကနေဒါ >
< start="837.502" dur="8.575"> မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်သားများဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="838.871" dur="8.742"> ၁၄ ရက်ကြာလက်ဝယ်ထားရှိရန်လိုအပ်သည် >
< start="844.075" dur="5.406"> ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုပေးသောအထီးကျန်ခြင်း >
< start="846.278" dur="4.905"> အကြောင်း >
< start="847.812" dur="6.407"> မိမိကိုယ်ကိုသီးခြားဖယ်ထုတ်ခြင်း၏အဓိကလိုအပ်ချက် >
< start="849.647" dur="6.274"> နှင့်တစ် ဦး ချင်းအတွေ့အကြုံ >
< start="851.349" dur="6.14"> ဆိုက်ရောက်အပေါ်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည် >
< start="854.385" dur="4.873"> အများပြည်သူအသုံးပြုခြင်းမှလည်းတားမြစ်ထားသည် >
< start="856.087" dur="4.672"> သူတို့ရဲ့ခရီးသွားဖို့ခရီး >
< start="857.655" dur="4.506"> မိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန်နေရာများနှင့် >
< start="859.391" dur="6.273"> သူတို့တားမြစ်ကြလိမ့်မည် >
< start="860.925" dur="5.64"> နေရာတစ်နေရာမှာမိမိကိုယ်ကိုသီးခြားထားခြင်း >
< start="862.361" dur="5.572"> သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည် >
< start="865.83" dur="3.972"> အားနည်းသောလူများ။ >
< start="866.798" dur="4.705"> >> သူ Mike: ထိုအရပ်၌ရှိ၏ >
< start="868.099" dur="9.51"> ဒဏ်ငွေနှင့်ပင်အလားအလာ >
< start="869.968" dur="8.776"> သူတို့ကိုချိုးဖောက်သူတို့အတွက် Arrest >
< start="871.703" dur="7.908"> AND ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏ >
< start="877.809" dur="3.57"> သောယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် >
< start="878.91" dur="4.906"> ပါဝင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီး >
< start="879.745" dur="6.806"> ယူနိုက်တက်စတိတ်ကနေဆက်ပြောသည် >
< start="881.513" dur="7.274"> FOR သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ရန် >
< start="883.982" dur="6.841"> CORONAVIRUS ၏ PLED ။ >
< start="886.685" dur="7.44"> >> AND နောက်ထပ်အဓိကအဖြစ်အပျက် >
< start="888.953" dur="6.875"> ၏ဖျက်သိမ်းခြင်း >
< start="890.989" dur="7.375"> PANDEMIC, THE 2020 နွေရာသီဂိမ်း >
< start="894.292" dur="6.507"> ရိုက်ပုတ်နေကြသည်, သူတို့ခဲ့ကြသည် >
< start="895.961" dur="7.741"> ကို AT မြေပုံ RIDGE တွင်ကျင်းပရန် >
< start="898.53" dur="7.675"> ဇူလိုင်လ၏အဆုံးနှင့်မြို့တော်ကိုအစားထိုး >
< start="901.033" dur="10.243"> 2024 ခုနှစ်တွင်စတင်လိမ့်မည်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ >
< start="903.868" dur="8.443"> ဗြိတိသျှစောင့်ရှောက်သောဟုဆိုသည် >
< start="906.404" dur="8.776"> ကိုလံဘီယာကျန်းမာရေးသည်သူတို့၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည် >
< start="911.442" dur="7.108"> ဦး စားပေး။ >
< start="912.51" dur="7.241"> >> COVID-19 ပန်ဒစ်တပ်ဖွဲ့များ >
< start="915.346" dur="5.973"> Bray ကျွန်းပိတ်သိမ်း >
< start="918.783" dur="4.539"> LANGLEY တွင်ဒေသဆိုင်ရာပန်းခြံ။ >
< start="919.885" dur="8.208"> >> ငါပြောတယ်အဲဒီမှာ >
< start="921.519" dur="8.309"> ရွေးချယ်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်ပါ >
< start="923.522" dur="8.709"> ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ - ငါအသုံးပြုတယ် >
< start="928.259" dur="4.339"> မိမိကိုယ်ကိုပန်းခြံသို့သော်ဤသူကားတစ် ဦး >
< start="929.994" dur="3.804"> ငါတို့ရှိသမျှသည်ပူဇော်သောယဇ် >
< start="932.397" dur="4.639"> ယူ။ >
< start="932.831" dur="5.506"> >> သူ Mike: မက်ထရိုဗန်ကူးဗား IS >
< start="933.932" dur="6.273"> မိမိ၏ပန်းခြံများဖွင့်လှစ်ဖို့ရှာနေ >
< start="937.202" dur="4.538"> 22 ဒေသဆိုင်ရာပန်းခြံများလည်ပတ် >
< start="938.503" dur="5.64"> ပSPိညာဉ်တရားပါဝင်သော >
< start="940.371" dur="7.342"> နယ်နိမိတ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်အများဆုံး >
< start="941.906" dur="7.108"> BC မှာရှိတဲ့မြူနီစီပယ်ရှိပြီ >
< start="944.309" dur="6.107"> ပိတ်ထား PLAYGROUNDS နှင့်အပြင်ဘက် >
< start="947.912" dur="4.139"> ၏အကြောင်းရင်းများ >
< start="949.18" dur="3.338"> အပြင်ထွက်လူမပါ >
< start="950.549" dur="3.937"> လူမှုရေးပတ်ပတ်လည်အောက်ပါအမိန့် >
< start="952.217" dur="4.437"> အကွာအဝေး။ >
< start="952.651" dur="4.438"> >> ကောင်းပြီ, ငါတို့ဒီနည်းကိုမမွငျဘူး >
< start="954.62" dur="5.705"> မက်ထရိုဗန်ကူးဗားအတွက်ကြာမြင့်စွာသောကာလ။ >
< start="956.855" dur="4.972"> ဟုတ်သည်။ >
< start="957.256" dur="6.84"> တစ် ဦး ကအောက်ပါအတိုင်းဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းများ >
< start="960.491" dur="5.34"> ပုံမှန်မှာပုံမှန် Litter >
< start="961.993" dur="9.177"> မှာ AT STATION, နှင့်စျေးနှုန်း >
< start="964.262" dur="8.242"> pump ပျက်သွားခဲ့သည် >
< start="965.997" dur="8.91"> ယခုနှင့်အတူအပတ်တိုင်း >
< start="971.336" dur="5.739"> ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Coronavirus နှိပ်စက် >
< start="972.738" dur="6.373"> ဝယ်လိုအားနှင့်ဤအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများ >
< start="975.073" dur="6.607"> ၁၈ နှစ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခန့်မှန်းချက် >
< start="977.208" dur="7.242"> ဓာတ်ငွေ့စခန်းများရှိနောက်ထပ် DROPS >
< start="979.277" dur="8.042"> လာမည့်အပတ်များနှင့်မင်္ဂလာဆောင်များ၊ >
< start="981.813" dur="7.141"> သင်တန်း၏, လကြာ, ပင် >
< start="984.616" dur="7.408"> စီမံကိန်းနှင့်အတူနှစ် >
< start="987.452" dur="7.575"> ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါအားလုံးရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="989.12" dur="8.109"> တစ် ဦး က SCREECHING တစ်ဝက်လာပါ >
< start="992.257" dur="6.707"> COQUITLAM စုံတွဲတစ်တွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် >
< start="995.193" dur="6.307"> သောနေ့စွဲတစ်ခုရက်စွဲတစ်ခုဖွစျသညျနှင့် >
< start="997.395" dur="5.673"> တောင်မှ GU ည့်သည်များ၏အဓိက >
< start="999.097" dur="4.871"> သူတို့ခုန်ဆင်းမတက်ရောက်နိုင်ဘူး, >
< start="1001.666" dur="4.038"> နှစ် ဦး စလုံးခြေမနှင့်ခြေချောင်းချစ်ခြင်းနှင့်အတူ >
< start="1003.234" dur="4.305"> သူတို့အားလုံးပတ်ပတ်လည်၌ရှိ၏။ >
< start="1004.102" dur="9.243"> >> သောကြာနေ့ LITERALLY >
< start="1005.87" dur="9.344"> WE 20 ကျနော်တို့မတ် >
< start="1007.705" dur="7.909"> ယောရှု Donaldson မှာပြောနေတာ - ATS >
< start="1013.512" dur="4.705"> ငါတို့သည့်ရဲ့ဆိုသညျကား >
< start="1015.38" dur="4.772"> လက်ထပ်ခဲ့သည် >
< start="1015.747" dur="4.938"> >> အိုင်တီအလွန်ကြီးမားသော WE set တစ် ဦး >
< start="1018.383" dur="5.005"> DRAPERY Archway ဒီမှာ >
< start="1020.318" dur="11.145"> ဧည့်ခန်း။ >
< start="1020.819" dur="13.047"> >> AND ကျနော်တို့ AT အခမ်းအနားရှိသည် >
< start="1023.588" dur="10.778"> 3:00 AND LIMO ရောက်ရှိလာခဲ့နှင့် >
< start="1031.663" dur="5.439"> သူ့ WHO ကမိတျဆှေတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="1034.065" dur="4.939"> အကောင်းဆုံးလူ။ >
< start="1034.499" dur="5.906"> >> WE ခေါင်းစဉ်သို့ LIMO ထဲသို့ဝင် >
< start="1037.302" dur="4.338"> ရွာသို့ငါတို့ဆင်း >
< start="1039.17" dur="3.905"> ချဉ်းကပ်မှုစတင်ခဲ့ပြီးကျွန်မတို့ကိုပြောကြားခဲ့သည် >
< start="1040.571" dur="5.974"> မျက်နှာကို KNOW ကျနော်တို့ KNOW >
< start="1041.84" dur="6.039"> မျက်နှာ, WE မျက်နှာကိုသိပြီးတော့ >
< start="1043.241" dur="6.473"> ငါတို့သူတို့ကိုမြင်ဖို့စတင်ခဲ့သည် >
< start="1046.711" dur="5.206"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်းတော်မှသူငယ်ချင်းများ >
< start="1048.012" dur="6.04"> သူတို့ဖိတ်မရနိုင်ပြီးသူတို့စီတန်း >
< start="1049.881" dur="5.606"> လမ်းပေါ်မှာ UP သူတို့ခဲ့ကြသည် >
< start="1052.083" dur="8.142"> ကားများနှင့်လူမှုရေးအကွာအဝေး၌တည်၏ >
< start="1054.285" dur="7.142"> သူတို့သည်မိမိတို့ကားထဲတွင်ရှိခဲ့သည်, >
< start="1055.653" dur="6.974"> သူတို့ရဲ့ကားအထက်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် >
< start="1060.391" dur="3.938"> သော, ရုံ HONKING, ရွှင်လန်းသော, >
< start="1061.593" dur="7.041"> သူတို့လိုအပ်သမျှ, SCREAMING >
< start="1062.761" dur="6.373"> လုပ်ရမယ်နှင့်သူတို့၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး >
< start="1064.495" dur="7.008"> သင်ရှိသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည် >
< start="1068.8" dur="5.973"> ပထမ ဦး ဆုံးအက။ >
< start="1069.267" dur="8.943"> >> ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုလှည့် >
< start="1071.737" dur="11.478"> တူညီတဲ့ Stasion သို့ရေဒီယိုနှင့် >
< start="1074.939" dur="10.044"> အိုင်တီ CRANKED AND အမှန်တကယ်ခံစားရတယ် >
< start="1078.343" dur="10.077"> ၁၉၅၀ ခုနှစ်များကဲ့သို့ပင် "အမေရိကန်စာလုံးပေါင်း" >
< start="1083.348" dur="6.774"> လမ်းများတန်းစီ AND ကားများ >
< start="1085.15" dur="7.074"> အမေရိကန်, မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံနှင့် >
< start="1088.553" dur="4.872"> အလယ်၌ဝတ်စုံအက >
< start="1090.288" dur="4.738"> PITT MEADOWS တွင်လမ်း >
< start="1092.357" dur="5.973"> ဗြိတိန်ကိုလံဘီယာ, GREAT ရှိခြင်း >
< start="1093.558" dur="6.007"> အချိန်နှင့်အိုင်တီမမြင်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="1095.16" dur="6.84"> >> AND အိုင်တီဒီလောက်ကြီး MAGIC ဖွစျသညျ။ >
< start="1098.563" dur="6.741"> >> ကြေငြာသူ: WEATHER ကို update >
< start="1099.797" dur="7.342"> ကိုယ်ခန္ဓာအရောင်းဆိုင်သို့အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်။ ၊ >
< start="1102.166" dur="7.842"> သင့်ကိုပျော်ရွှင်စွာပြန်လာပြီ >
< start="1105.503" dur="5.573"> နေရာ, လေမိုင်များနှင့်ကြီးမားသော >
< start="1107.305" dur="5.539"> အပြုံးများ။ >
< start="1111.343" dur="1.901"> >> သူ Mike: ငါမင်္ဂလာဆောင်ကိုချစ် >
< start="1113.044" dur="1.502"> ဇာတ်လမ်း။ >
< start="1113.378" dur="2.603"> >> သောကောငျးတစျခုဖွစျသညျ။ >
< start="1114.68" dur="4.204"> >> သင်တိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ >
< start="1116.114" dur="3.103"> >> AND သင်ဘာလုပ်ဖို့ရှိသည် >
< start="1119.05" dur="0.701"> လုပ်ပါ >
< start="1119.417" dur="2.003"> >> သူ Mike: ဟုတ်သည်။ >
< start="1119.885" dur="3.603"> >> သင်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းရသလား >
< start="1121.586" dur="3.236"> ပြင်ပ၌ယနေ့ယနေ့? >
< start="1123.688" dur="3.237"> >> သူ Mike: အနည်းငယ် BIT မဟုတ်အများကြီး။ >
< start="1124.956" dur="4.105"> >> ငါသည်သင်တို့ကို AT မည်သူမဆိုမျှော်လင့်ပါတယ် >
< start="1127.091" dur="4.205"> အိမ်သို့အခွင့်အလမ်းရပြီ >
< start="1129.227" dur="3.47"> အထူးသဖြင့်သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် >
< start="1131.462" dur="3.138"> သောကြောင့်, တောင်ဘက်ကမ်းခြေ >
< start="1132.864" dur="3.871"> သင်ဒီနေ့အတွေ့အကြုံက >
< start="1134.799" dur="3.571"> ဝေးကွာသောမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာရန်အကြောင်း >
< start="1136.901" dur="4.005"> မကြာမီ B ကူး >
< start="1138.536" dur="3.938"> ကျနော်တို့သို့သွားပါပြီ >
< start="1141.072" dur="2.67"> မသတ်မှတ်ရသေးသောလမ်းကြောင်း >
< start="1142.64" dur="3.003"> အဓိကမနက်ဖြန်နံနက်ခင်း၊ >
< start="1143.908" dur="4.072"> မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုအတွက်အန္တရာယ် >
< start="1145.777" dur="3.971"> ဗန်ကူးဗားကျွန်း, နိမ့် MAINLAND >
< start="1148.146" dur="3.771"> တနေ့မှတဆင့် LIFTING >
< start="1149.881" dur="4.939"> ပြီးတော့နောက်ကွယ်မှ >
< start="1152.15" dur="4.738"> မင်းသား George ကဲ့သို့သောမြောက်ဘက်နေရာများ >
< start="1155.019" dur="3.238"> ငါးစင်တီမီတာကောက်နေ BY >
< start="1157.021" dur="2.403"> မတိုင်မီနေ့ရက်အတွင်းမနက်ဖြန်မနက် >
< start="1158.39" dur="3.136"> အိုင်ထဲသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည် >
< start="1159.59" dur="4.639"> ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ FOR >
< start="1161.726" dur="4.572"> အဖြစ်ကောင်းစွာ KOOTENAYS >
< start="1164.429" dur="3.537"> OKANAGAN, မသတ်မှတ်ရသေးအခြေအနေ >
< start="1166.464" dur="3.504"> အဲဒီမှာဒါပေမယ့်မဆိုးဒီနည်းကို IS >
< start="1168.166" dur="3.671"> မိတ်ဆွေဖြစ်မယ့်, သွား >
< start="1170.101" dur="3.571"> ရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးသို့, \_ t >
< start="1172.003" dur="3.504"> ဘီစီဖြတ်ကျော်အပူချိန်အေး >
< start="1173.838" dur="4.572"> သူတို့ဖြစ်သင့်အလယ်အလတ်တွင် >
< start="1175.707" dur="5.706"> သငျသညျသောပိတ်ဆို့မှုကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ် >
< start="1178.543" dur="4.471"> အထွေထွေအဖုံးနှင့်အအေးလေ >
< start="1181.546" dur="4.105"> မြောက်မှဆင်းလာ >
< start="1183.181" dur="5.139"> ကျနော်တို့ကောင်းသောလူမှုရေးပြောပြီ >
< start="1185.817" dur="4.305"> အကွာအဝေးနှင့်သေချာအောင် >
< start="1188.453" dur="3.337"> ကျနော်တို့အချိန်အိမ်တွင်းနှင့်ဤအချိန်ဖြုန်း >
< start="1190.321" dur="3.504"> ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ရက်အတွက်အပတ် >
< start="1191.956" dur="4.205"> မြားစှာသောအလေ့အကျင့် >
< start="1193.991" dur="4.339"> ရနိုင်, အိုင်တီဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ဘူး >
< start="1196.361" dur="4.738"> နောက်ထပ် SNOW ထဲသို့အိုင်တီဆိုတာဘာလဲ >
< start="1198.497" dur="4.538"> တနင်္လာနေ့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရလိမ့်မည် >
< start="1201.265" dur="3.271"> အများကြီးငြင်းဆန် AND အားလုံး >
< start="1203.201" dur="2.603"> ဒါငါးခုကိုကြည့်မျှော် >
< start="1204.669" dur="2.57"> ကြှနျုပျတို့ဖူးသောအရာ >
< start="1205.97" dur="3.104"> ဒီမှာအတွက်ဒီမှာမြင်ကြဘူး >
< start="1207.438" dur="3.471"> ဒါပေမဲ့ငါယုံကြည်စိတ်ချရလိမ့်မယ် >
< start="1209.24" dur="4.172"> တစ်ခုချင်းစီကိုအနည်းဆုံး FOR >
< start="1211.109" dur="3.837"> လာမည့်ငါးဆယ့်ငါးရက်အကြာတွင် A နှင့်ဆက်ဆံလိမ့်မည် >
< start="1213.578" dur="3.971"> ရေပန်းအနည်းငယ်နှင့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ဖြစ်နိုင်သည် >
< start="1215.112" dur="4.506"> အိုင်တီနောက်ထပ်ဖြန့်ဖြူး >
< start="1217.715" dur="3.504"> နောက်အပတ်သို့တိုးနှင့် GET >
< start="1219.784" dur="3.438"> ဒီနည်းကိုတစ် ဦး တည်းအဆင်ပြေစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်း။ >
< start="1221.352" dur="2.437"> >> ထက်, အိုင်ဒီအိုင်ဒီ >
< start="1223.355" dur="1.368"> အိမ်မှာနေ။ >
< start="1223.922" dur="4.872"> ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1224.856" dur="6.14"> >> သင်ကကြိုဆိုပါတယ်။ >
< start="1228.927" dur="4.438"> >> တစ် ဦး ကဗန်ကူးဗားကျွန်းအမျိုးသမီး GOT >
< start="1231.162" dur="3.938"> ဖြစ်လျက်ရှိလက်ဆောင်ပေးမယ်အတော်လေး >
< start="1233.531" dur="1.936"> သူမ၏နှင့်အတူအိမ်မှာအထီးကျန် >
< start="1235.266" dur="11.712"> ခင်ပွန်း။ >
< start="1235.6" dur="14.682"> [ကစားနည်းများ] >
< start="1243.841" dur="8.843"> >> သူမကြားရတာအရမ်းပျော်ခဲ့တယ် >
< start="1247.111" dur="7.508"> ပိုက်လိုင်းကသူသည် IG တီးသည်။ >
< start="1250.448" dur="6.24"> သူမ၏ 82th မွေးနေ့ကိုမှတ်သား >
< start="1252.85" dur="6.908"> သူမ၏သပိတ်ပင် BAY နေအိမ်နှင့်သူကပြောပါတယ် >
< start="1254.785" dur="8.677"> အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကုသမှုတစ်ခုပါ >
< start="1256.854" dur="7.108"> သောသူတို့သည်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းပြသ >
< start="1259.891" dur="6.206"> အလွန်ကောင်းသောလူမှုရေးအကွာအဝေး >
< start="1263.628" dur="4.538"> ညွှန်ကြားချက်။ >
< start="1264.096" dur="5.638"> >> WE ဒီနည်းကိုမှတဆင့်ရလိမ့်မည် >
< start="1266.264" dur="7.408"> အတူတကွ။ >
< start="1269.867" dur="9.11"> >> ဖြတ်ကျော်မက်ထရိုဗန်ကူးဗား >
< start="1273.871" dur="10.378"> တောင်တန်းများလက်ခုပ်သံများပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ် >
< start="1276.24" dur="9.51"> FRONTLINE အလုပ်သမားများအတွက်အိုင်တီ >
< start="1279.143" dur="8.576"> ရှေ့ FOR "ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု >
< start="1284.382" dur="5.339"> ဆုံးမ "နှင့်တောင်တန်းများရှိသည် >
< start="1285.95" dur="6.073"> အဖြစ်ကောင်းစွာ IN ၌မှီဝဲ >
< start="1287.885" dur="6.474"> ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှာ Victoria >
< start="1289.887" dur="5.372"> အသိအမှတ်ပြု LIT >
< start="1292.189" dur="5.406"> ဘီစီကျန်းမာရေးကုသမှု၏ Hard အလုပ် >
< start="1294.525" dur="5.306"> ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များနှင့်ဝန်ထမ်း။ >
< start="1295.393" dur="6.139"> >>> အိန္ဒိယက၎င်း၏လေယာဉ်ပိတ်ပစ် >
< start="1297.729" dur="5.072"> COVID-19 ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရန် >
< start="1299.997" dur="4.973"> နှင့်သောဇာတ်လမ်း FOR လာမ >
< start="1301.699" dur="3.271"> နောက်တစ်ခု >